Kulan looga hadlayay horumarinta dhaqaalaha G/Hiiraan oo lagu qabtay Beledweyne – Radio Muqdisho
Kulan looga hadlayay horumarinta dhaqaalaha G/Hiiraan oo lagu qabtay Beledweyne
Kulan looga hadlayay horumarinta dhaqaalaha gobolka Hiiraan ayaa maanta lagu qabtay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Kulankan oo uu soo qaban qaabiyay maamulka gobolka Hiiraan ayaa waxaa ka qeybgalay xubno ka socday qeybaha bulshada gobolka, aqoonyahanno iyo hey’adaha gargaarka, waxaana looga hadlay sida loo horumarin karo wax soo saarka dalagyada beeraha, ganacsiga iyo sidii loo abuuri lahaa koboc dhaqaale oo mug leh.
Macalin Cismaan Cabdi Qalafoow oo ah guddoomiyaha degmada Beledweyne oo ka hadlay kulanka ayaa tilmaamay in horumar dhaqaale lagu gaari karo wada shaqeynta maamulka iyo bulshada, isagoo ka codsaday bulshada iney maamulka kala shaqeyaan dhinaca horumarka dhaqaalaha.
“Waxaan diyaar u nahay hadaan nahay maamulka degmada Beledweyne inaan horumarino adeegyada bulshada waxqabadkeenana aan tusno hey’adaha gar gaarka si ay u arkaan waxqabadkeena’ ayuu yiri gudoomiyaha degmada Beledweyne.
Intii uu kulanka socday ayaa la isku weydaarsaday afkaar iyo tusaalooyin lagu gaari karo horumarka dhaqaaleaha gobolka Hiiraan, kuwaasoo ay ka mid ahaa ahaayeen in Shaqooyin la abuuro, ganacsiga oo la dhiirigeliyo lana helo suuqyo hufan, in la helo maalgashi bartilmaameed leh iyo arrimo kale.
Yuusuf Garad oo wareysi la yeeshay Khubaro soomaliya u matalaya Dacwadda Badda